Omaly talata 28 novambra no nosokafana tamim-pomba ofisialy eny amin’ny efitrano fandraisana fivoriana iraisam-pirenena eny Ivato izany, haharitra telo andro. Tantara, kolontsaina ary vakoka, no hibahan-toerana ahitana ireo mpanabe sy mpikaroka manodidina ny 40 any ho any izay hampahafantarina ny taranaka faramandimby ny momba azy sy ny fisiany. Santionany amin’izany i Lucile Rabearimanana avy eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, Alexandre Adelaar avy amin’ny oniversite any Melbourne… "Asie du sud-est, Madagascar. l'Odyssée d'un peuple de la mer" no lohahevitra horaisina mandritra ity symposium ity entina hanomezana tombony manokana ireo mpandala tantara sy mpanao fikarohana eto amintsika. Mpanohana ofisialy ny hetsika ny vondrona STAR. Mifanandrify indrindra amin’ny fanandratan’izy ireo ny kolontsaina Malagasy mantsy izao hetsika izao sady hahafahany mifandray sy mifanakalo hevitra amin’ireo mpandraharaha tonga hitsidika ny tranohevany ihany koa. Niezaka ny nanaraka ny vanim-potoana nisy teto amintsika ny vondrona Star tao anatin’ny 65 taona lasa izay. Maro ny anjara biriky noraisiny tamin’izany toy ny fanohanana ireo mpanakanto Malagasy, ny fanohanana ny sehatry ny sosialy toy ny fanabeazana izay andaniany vola 1 miliara Ar isan-taona... Hisy moa ny fampahafantaran’izy ireo ny tantaran’ny zava-pisotro vokariny.